HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo soo bandhigay Waqtiga uu bilaabanayo Sharciga Cusub ee Corona iyo inta uu soconayo
3 weeks ago Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Dowlada ayaa maanta u soo bandhigtay sharciga ku meel gaarka ah ee Corona gudiga sharciga ee Dalka. Wasiirka arrimaha bulshada Lena Hallingrin ayaa shir jaraa’id maanta qabatay ayaa ku sheegtay in sharcigan uu dhaqan galayo laga bilaabo 10-ka bisha Janaayo ilaa dhamaadka bisha Sebtember hadii baarlamaanka uu ansixiyo.
Sharcigu wuxuu siinayaa dowladda, hay’adaha iyo dowladaha hoose awoodo dheeri ah oo lagu soo rogo talaabooyin adag sida xiritaanka howlaha ganacsiga iyo meelaha caamka ah, xaddidaya saacadaha shaqada iyo isu imaatinka ugu badan, iyadoo lagu ganaaxayo ganaaxyo.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Ibraahim Baylan ayaa yiri “Dowladdu waxay go’aan ka gaari doontaa sharciyada sharci ahaan ku qabanaya dukaamada iyo xarumaha wax laga iibsado haddii sharciga la ansixiyo.” Sida ku xusan SVT.
Hallingren wuxuu yiri sharciga “wuxuu kordhinayaa fursadaha lagu xadidayo awooda dadka inay isugu soo baxaan meelaha dadku isugu yimaadaan, sida fagaarayaasha, jardiinooyinka
ama barkadaha lagu dabaasho.” Mamnuucid buuxda ayaa lagu dhawaaqi karaa haddii halista dadka badan ka dhalan karta.
Golaha sharcigu wuxuu sheegay in go’aamada dowlada ee ku aadan arintaan ay tahay in dib u eegis ay ku sameeyaan baarlamaanka laba maalmood gudahood, halka dowlada hada ay rabto muddo bil ah ka hor inta uusan baarlamaanku mowqif ka qaadan ficilkiisa Waxaa jira taageero balaaran oo baarlamaanka ku saabsan xayiraadaha adag, laakiin xisbiyada mucaaradka waxay ku baaqayaan in si cad loo qeexo sharciga magdhowga kuwa dhaqaale ahaan saameynaya xirnaanshaha dowladda.